Android ဖုန်းထဲမှာသုံးဖို့နှစ်တစ်ရာ ပြက္ခဒိန် ထွက်ပီ ( 1901 - 2016 ) အထိ ~ mgkhainghtoo
Android ဖုန်းထဲမှာသုံးဖို့နှစ်တစ်ရာ ပြက္ခဒိန် ထွက်ပီ ( 1901 - 2016 ) အထိ
23:42 မောင်ခိုင်ထူး No comments
ဖုန်းထဲမှာသုံးဖို့နှစ်တစ်ရာ ပြက္ခဒိန် ထွက်နေပါပြီ အသုံးလိုသူများ ဆွဲလိုက်ပါ
ဒီလင့်မှာ Download ယူပါ - ဖုန်းအတွက် နှစ်တစ်ရာ မြန်မာပြက္ခဒိန်
မူရင်းကယူချင်ရင် - https://play.google.com/ပြက္ခဒိန်
- First Android English-Myanmar Calendar for 100 years (from 1901 to 2016.)
- It is Offline Calendar.
- Flexible Font Size Adjustment
- Single Day View with details
- Myanmar official Holiday for the month
P.S. This program is made to our best knowledge. In case if you found any error/problem (especially 2013 onwards), please contact us at MmCalendar2012@gmail.com or MmCalendar Facebook to feedback. Thanksalot.
စက်ရုပ်ရဲ့ ပထမဆုံး နှစ် ၁၀၀ ပြက္ခဒိန်ပါ။ 1901-2016 အထိ။ သင့် ဖုန်းကို မူရင်းအတိုင်း ဘာမှ ပြုပြင်ရန် မလိုပါ။ အင်တာနက်နဲ့ ချိတ်ပြီး သုံးရန်မလို။
ရှေလနှင့် နောက်လကို slide လုပ်ပြီး ပြောင်းပါ။ စာလုံး အကြီးအသေးကို A နှင့်aနှိပ်ပြီး၊ လိုသလို ပြောင်းယူပါ။ နေရက်ရဲ့ အသေးစိတ်ကို သိလိုက အဲဒီနေပေါ်မှာ ကြာကြာ ဖိပေးထားပါ။